Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အပိုင်း(၁) လှိုင်းသံများမှ စာလုံးများသို့
အပိုင်း(၁) လှိုင်းသံများမှ စာလုံးများသို့
“ကျွန်မ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်၊ ကျွန်မ ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာက မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ။ မယုံရင် ကျွန်မတို့မိသားစုဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်မအခု ဒုက္ခရောက်လာလို့ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မပါတဲ့ အတွက် မော်တော်စီးခမပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါရှင်”။
ရခိုင်ပြည် ဘူးသီးတောင်မြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ ထွက်ခွာလာလာသော မော်တော်ပေါ်၌ မော်တော်စီးခ တောင်းခံနေသူကို ငိုယိုတောင်းပန်နေသည့် ရုပ်ရည်သနားကမားနှင့် ဗမာအမျိုးသမီးလေးတစ်ဦး၏ အဖြစ်ကို လွန်ခဲ့သောအနှစ်သုံးဆယ်ကျော် ၀န်းကျင်က ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရသည်။
နံဘေးမှ ခရီးသည် ရခိုင်အဘွားကြီးတစ်ဦးက စပ်စုလိုက်သည်။ “သမီးက ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့လဲ?” “လူတစ်ဦးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ချစ်ကြိုက်ကြပြီး ကျွန်မသူနဲ့လိုက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဇာတိက
ရခိုင်ပြည်မှာသွား နေမယ်၊ နောက်မှရန်ကုန်မှာ ပြန်လာနေကြမယ်လို့ပြောတော့ မိဘဆွေမျိုးတွေကို ရှောင်တိမ်းလိုတဲ့ကျွန်မ အလွယ်တကူလက်ခံပြီး ရခိုင်ပြည်ကိုလိုက်လာပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့စကြိုက်ကြတုန်းက သူ့ကိုသူ ရခိုင်လူမျိုး လို့ပြောထားခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်မြေကိုစနင်းမိလိုက်တာနဲ့ သူဟာ ကုလားလူမျိုးသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မသိလိုက် ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်မ ဘာတတ်နိုင်တော့မှာလဲ? မထူးတော့ဘူးလို့ဖြေသိမ့်ပြီး သူ့မိဘ တွေနေတဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့ထိ လိုက်လာပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့ကိုရောက်တော့ မြို့အစွန်အဖျားက ကုလားရပ်ကွက်မှာ သက်ငယ်မိုးတဲသာသာ အိမ်ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါ သူ့မိသားစုတွေ တပြုံကြီးက ကြိုနေ ကြပါတယ်။ နောက်မှသိရတာက သူ့ရဲ့အရင်မိန်းမနဲ့ သူ့ကလေးတွေလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ရန်ကုန်ကို ပြန်ပို့ပေးဖို့ သူ့ကိုအကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ခဲ့တယ်။
သူက “ရန်ကုန်ကိုပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်မှာပါ၊ ရန်ကုန်မှာ ငါ့အလုပ်တွေကောင်းနေတာကိုလည်း နင် သိတာပဲ၊ ဒီမှာဘာလို့ အငတ်ခံနေရမလဲ။ ပြန်ဖို့ကို နေ့တိုင်းငါကြိုးစားနေတယ်။ မှတ်ပုံတင်လုပ်လို့ရတာနဲ့ ချက်ချင်း ရန်ကုန်ကိုပြန်ကြမယ်။
အခုအမှတ်ပုံတင်ဌာနမှာ ရခိုင်အရာရှိ ရှိနေတုန်းမို့လို့ အခက်အခဲရှိ နေတာပါ။ မကြာခင်မှာ ဗမာအရာရှိ ပြောင်းလာဖို့ကြားထားတယ်။ သူရောက်လာလို့ကတော့ ပိုက်ဆံ ဒီနေ့ ပေးရန် နက်ဖြန် မှတ်ပုံတင်ရမှာပဲ။
အခုရှီနေတဲ့ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တယ်။ ဘင်္ဂလား ဒေရှ့်ဖက်ကမ်းကနေ ၀င်ရောက်လာကြတဲ့ ငါတို့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် လုံးဝမပေးချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံပေးတာတောင် မှတ်ပုံတင်လုပ်မပေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင် တစ်ခေါက်က ရန်ကုန်ကိုသွားတုန်းက သူများမှတ်ပုံတင်ကိုငှားရမ်းပြီးသွားခဲ့တာ၊ သူအတင်းပြန်တောင်း နေရုံမက မှတ်ပုံတင်လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်နေတယ်ကြားလို့ အခုလိုပြန်လာတာ ကံဆိုးချင်တော ရခိုင် အရာရှိပြောင်းလာတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတာပဲ”လို့ပြောပြီး ကျွန်မကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖျောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ စောင့်နေလိုက်တာ ကလေးတစ်ယောက်သာမွေးသွားတယ်။ ရန်ကုန်ကိုပြန်ပို့မပေးဘူး၊ ကျွန်မကို ဘူးသီးတောင်မြို့ထဲကိုတောင် သွားလာခွင့်မပေးဘူး။ သက်ငယ်မိုးအိမ် နွားချေးရုံနဲ့ မြေကြီးကို နွားချေးနဲ့ သမန်တလင်းကိုလုပ်ထားပြီး မှောင်မဲနေတဲ့အိမ်မှာ သူ့တို့ရဲ့ကိုယ်နံ့နဲ့ မုန်ညင်းဆီနံ့တွေလည်း လှိုင်လို့ ထမင်းကိုအတင်းမျိုချစားသောက်နေရတဲ့ ဘ၀ငရဲကို လုံးဝမခံနိုင်တော့တာနဲ့ ကလေးကိုပါပစ်ပြီး အခုလိုထွက်ပြေးလာရတာပါ။
ခရီးသည် ရခိုင်အဘွားကြီးက “သမီးတို့ခေတ်မှာ လင်ယူလွယ်လွန်းလို့ ခုလိုဖြစ်ရတာ”။ နောက်ခရီး သည်အမျိုးသမီးတဦးက “နင်ကရန်ကုန်သူဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်ယူမယ့်လူဟာ ရခိုင်လား၊ ကုလားလား ခွဲခြား မသိအောင် အနေရလား?။ နောက်အမျိုးသမီးကြီးတစုက တယောက်တပေါက်စီပြောကြသည်မှာ “ငါတို့ ဒီခရီးကို အစုန်အဆန်သွားလာနေကြတာ ဒီအဖြစ်မျိုးတွေ့ရပေါင်းများပြီ၊ ကုလားတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်လို့ညာပြောလိုက်ရုံနဲ့ ယုံကြတဲ့ဗမာမလေးတွေကို ငါအံ့သြလို့မဆုံးဘူး”။
“ဒီကလေးမလေးက ကံကောင်းသေးတယ်၊ တချို့ဗမာမလေးတွေဆိုရင် စစ်တကောင်းမြို့က ဖာတန်းမှာ ရောင်းစားခံကြရတာတွေ့ဖူးတယ်”။
“ပေါက်တဲ့နဖူး မထူးတော့ပါဘူးလို့ ဇာတ်မြုပ်နေကြတဲ့ ဗမာမလေးတချို့ကို မောင်တောမြို့နယ်က ရွာတချို့မှာ ငါကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးတယ်”။
ဒါတွေဟာ ကုလားတွေက တချက်ခုတ်လေးချက်ပြတ်လုပ်တဲ့ စီမံကိန်းကြီးပဲ။ (၁)ဗမာမလေးကို ယူပြီး ကောင်မလေးရဲ့ မိသားစုဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းကတဆင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရအောင် ကြိုးပမ်း ကြတယ်။ (၂)သူတို့ဘာသာထဲကို အတင်းဝင်ခိုင်တယ်။ (၃) သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် ဗမာ မလေးရဲ့ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကျားကန်ဒေါက်တိုင်အဖြစ် အသုံးချတယ်။ (၄) ဗမာမိန်းခလေးကို ရယူနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက ဆုလဒ်တွေရတယ်”။
၁၉၉၇ ခုန့်မှာ နောက်တယောက်တွေ့ပြန်ပြီ။ တောင်ကုတ်မြို့မှ ပန်းတောင်းမြို့သို့ ရခိုင်ရိုးမကို ဖြတ်ကျော်၍ ပြေးနေသည့်ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
“ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရုံမက ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းဖြစ်နေတာမို့ သူနဲ့လိုက် ပြေးခဲ့တယ်။ ဒီကိုရောက်မှ ကုလားဖြစ်နေရုံမက ကျွန်မကို သူတို့ဘာသာထဲဝင်ရမယ်ဆိုလို့ ခုလိုထွက်ပြေး လာခဲ့တာပါ”ဟု တောင်ငူမြို့သူ ကရင်မလေးတယောက်၏ ရင်ဖွင့်သံကို ကိုယ်တိုင်ကြားရသောအခါ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ပျက်နေကြသနည်း?
အဖြေကို ကျွန်တော်ရန်ကုသို့ ၁၉၇၇ ခုနှစ်ခန့်တွင် စရောက်လာမှ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ တွေ့ရပါတော့ သည်။
မဂိုလမ်းကထမင်းဆိုင်တဆိုင်တွင် ထမင်းစားနေတုန်း စားပွဲထိုးဗမာလေးက ကျွန်တော့်နောက် ဘက်ရှိ စားပွဲထိုးဖြစ်ဟန်ရှိသူကို လှမ်းနောက်လိုက်သည်။ “ဟေ့ကောင် ရခိုင် ရန်ကုန်ရောက်တာ ဘယ် လောက်မှမကြာသေးဘူး ကျော်ဟိန်းစတိုင်လုပ်နေတယ်၊ မင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ရင် ရခိုင်ပြည် ကို ပြန်ပို့ရလိမ့်မယ်”။ နောက်ကျောဘက်ကလူက “ရခိုင်ပြည်ကိုတော့ ပြန်မပို့ပါနဲ့ဗျာ ငရဲပြည်ကို ပို့ရင်ပို့ပါ” တဲ့။ ဘယ်လိုရခိုင်ပါလိမ့်? စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကုလားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်။ “မင်းဘယ်ဇာတိလဲ?”လို့ ရခိုင်လိုမေးလိုက်တဲ့အခါ သူလုံးဝ နား မလည်ဖြစ်နေ၍ “ငါရခိုင်ပဲ မင်းဘယ်မြို့ကလဲ?ဟု ဗမာစကားနှင့်မေးလိုက်သောအခါမှ “ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ပါ”ဟု လွှတ်ကနဲပြောမိပြီး မျက်စိမျက်နှာပျက်ကာ ထမင်းချက်ခန်းထဲသို့ ၀င်သွားသည်။ ပင်လယ်မှပတ်၍ ၀င်လာသော ဘင်္ဂလီကုလားများသည်ပင် ရခိုင်တုများအဖြစ် တွင်ကျယ်နေကြပါလား။
ရခိုင်ပြည်တွင် ရခိုင်စကားသည် ကြားခံစကားကြီးဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်တွင်နေထိုင်သော လူမျိုး တစ်စုနဲ့တစ်စုဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင် ၎င်းကုလားများနှင့် ချင်း၊ မြို့၊ ခမီ စသည့်တိုင်းရင်းသားများ ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဗမာလူမျိုးများနှင့် တိုင်းရင်းမျိုးနွယ်စုများပြောဆို ဆက်ဆံရာတွင် လည်းကောင်း၊ ကုလားနှင့်ဗမာ ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင်လည်းကောင်း၊ ရခိုင်စကားကို ကြားခံဘာသာ စကားအဖြစ် ပြောဆိုကြသည်။
လူငယ်ကုလားများမှာ ကုလားမိန်းခလေးများထက် ရခိုင်စကားပိုမို ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ယခုတွေ့နေရသော စားပွဲထိုးကုလားလေးမှာ ရခိုင်စကားကိုနားမလည်ရုံမျှမက ရခိုင်ပြည်မှ မြို့၊ ရွာ တစ်ခုခု၏အမည်ကို ပြောဆိုလိမ်လည်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းမှာ သူပြောသွားသကဲ့သို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တိုက်ရိုက်လားသူများမှ တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ပုသိမ်ဘက်မှ စက်လှေများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို ဆန်မှောင်ခိုပို့ကြသည်။ ပြန်လာသောအခါ စက်လှေဝမ်းခေါင်ထဲ၌ ဘေထုပ်နှင့် မှောင်ခိုပစ္စည်းမျိုးစုံတင်ကာ ကုန်းပတ်ပေါ်မှ ဘင်္ဂလီကုလားများကို ငွေကြေးရယူပြီးတင်ဆောင်လာကြ သည်။ သူတို့မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် ရခိုင်မြေကိုမနင်းဖူးသော ‘ရခိုင်အတု’ များအဖြစ်တွင်ကျယ် နေကြသည်။
၁၉၇၈ ခုနှစ်ခန့်က ကျွန်တော် ရှမ်းပြည် ရပ်စောက်မြို့သို့ အလည်ရောက်ခဲ့သည်။ “ရခိုင် တွေကျွန်တော်တို့ မြို့နားမှာ ရွာတည်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်” ဟု တည်းခိုနေသောကောင်လေးကပြော၍ လိုက်ပိုခိုင်းရာ “ဟိုမှာတွေ့လား ဘုလုံးကြီးနဲ့မြင်နေရတာ ရခိုင်ဘုရားကျောင်းပဲ” ဟုလက်ညှိုးထိုးပြသည်။ “အဲဒါရခိုင်မဟုတ်ဘူး၊ ကုလားကွ၊ ကုလားတွေ”။
၁၉၈၅ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကလည်း ကဝမြို့နယ်က အဘိုကြီးတစ်ဦးက သူတို့ရွာနားက ရွာလည်း ရခိုင်ရွာဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ဘရားကျောင်းနဲ့သူတို့ ကိုးကွယ်ကြကြောင်းပြောရာ ကျွန်တော်က “ဘုကြီးနဲ့ဘုရားကျောင်းမဟုတ်ဘူးလား?” လို့ တခါတည်း တန်းမေးလိုက်သည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သားများအားလုံး ထိုအကြောင်းကိုသိထားကြရန် အရေးတကြီး လိုအပ် နေခြင်းကြောင့် စာရေးသား ထုတ်ဝေရန် ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရှိနေစဉ်ကပင် ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အများသိကြသိအတိုင်း ကန့်သတ်မှုမြောက်များစွာရှိ၍ ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ပေ။
သို့နှင့် ယနေ့တိုင်ဆိုလျှင် မြန်မာအမျိုးကောင်းသားသမီးများ ဘယ်နှစ်ယောက်ထိ အမျိုးပျက်၊ ဘာသာ ပျက်၊ ဘ၀ပျက်ရသော အခြေအနေသို့ ကျရောက်သွားရပြီးဖြစ်မည်ကို ခန့်မှန်းကြည့်က ရင်လေး မီသည်။
ဘွဲ့ရ ပညာတတ် ဆိုသူများပင် ရခိုင်လူမျိုးအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသည်က ပိဆိုးနေ သည်။ ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ ဘွဲ့ရကွန်ဖူးဆရာကြီးတယောက်က “မင်းတို့ရခိုင်က ထားဝယ်နဲ့နီးနီးလေးပဲ လား?”တဲ့။ ကျွန်တော်အံ့သြသွားသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်သို့ရောက်ပြီး ချီးဘားခရိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် အတူတူလုပ်နေသူ (Ms.c) ပညာတတ်ကြီးတစ်ယောက်က “ရခိုင်ဆိုတာ တောင်ပေါ်သားပဲမဟုတ်ဘူးလား”ဟု မေးလိုက်သောအခါ ပို၍အံ့သြသွားခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ဗဟုသုတခေါင်းပါးသူလည်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံတကာထုတ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ် များကို မျက်နှာနှင့်မခွာတမ်းဖတ်သည်။ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကွန်မြုနစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူထုဦးလှ၏သား စိုးဝင်းနှင့်အတူတူ တောခိုရန်ကြံစည်ဖူးသည်ဟုဆိုပါသည်။ နိုင်ငံတကာဗဟုသုတအထူးပြည့်စုံသူ တစ် ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရခိုင်လူမျိုးအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမသိရှပေ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကျူတာလုပ်ခဲ့ဖူးသူ ပညာတတ်ကြီးတဦးကလည်း “ဂျပန်ပြည်မှာ ရခိုင် အသင်း စည်းစည်းလုံးလုံးရှိနေတာ သူတို့ကလူနည်းစုတိုင်းရင်းသွားတွေဖြစ်နေလို့ပါ”ဟုဆိုပြန်သည်။
ထို့အပြင် ၁၉၈၁ ခုခန့်ကလည်း မိတ္ထီလာမြို့ ထမင်းဆိုင်တွင် ရခိုင်လူမျိုးကို ကြားသာကြားဖူးသည် မမြင်ဖူးဖို့ပါဟုဆိုကာ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစုကိုလာကြည့်သော ဗမာအဘွားကြီးနှစ်ဦး၏ အဖြစ်ကို ပင်မအံ့သြနိုင်တော့ပါ။
သူတို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ နားထဲစွဲဝင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ “မင်းတို့တွေ ဗမာပြည်ကိုရောက်နေတာ့ ပုဆိုးနဲ့အင်္ကျီနဲ့၊ ရခိုင်ပြည်မှာကျတော့ လံကွတ်တီးနဲ့နေကြလား?”။
ဤသို့ဤနှယ် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း၊ စာပေတို့ အမှောင်ဖုံးခံနေကြ ရခြင်းကို ကုလားတွေက အခွင့်ကောင်းယူကာ ရခိုင်တုလုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုဝါးမျိုရန် အခွင့် အခွင့်အရေး ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် စာစောင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီရန်ဆန္ဒ ပိုမိုကြီးမားလာပါတော့သည်။ သည်ကြားထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ရခိုင်အများစု အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောနေရာသို့ မြန်မာပြည်မှ ရောက်ခါစက ရန်ကုန်သားတစ်ဦးဝင်ရောက်လာရာ သူက“ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ သိကျွမ်းခင်မင်တဲ့ ရခိုင် တွေအများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့က ၀တ်သားမစားဘူး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တယ်၊ အကိုတို့ရခိုင်က ဘယ်လိုရခိုင်တွေလဲ?”။ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တစု ဘုရားတမိအောင် အံ့သြသွားကြသည်။ ကုလားကရခိုင် ဖြစ်ပြီး ရခိုင်က ကုလားဖြစ်သွားရမည့် အခြေအနေထိ ကျရောက်နေပြီလော?ဟု အံ့သြတုန်လှုပ်မိကြရ သည်။
မြန်မာပြည်ထဲတွင် ဘင်္ဂလီခေါ်တောကုလားများက ရခိုင်အဖြစ်တွင်ကျယ်နေသကဲ့သို့ ပြည်ပတွင် လည်း ဘင်္ဂလီခေါ်တောကုလားများက “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး”နာမည်လိမ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုတင်၍ တွင်ကျယ်နေ သည်ကို တွေ့မြင်နေကြရသည့်အခါ ရှင်းလင်းတင်ပြရန် သမိုင်းပေးတာဝန်သည် ကျွန်တော်တို့ ဂျပန် ရောက်ရခိုင်အမျိုးသားများသာမက နိုင်ငံတကာရောက် ရခိုင်အမျိုးသားများ၏ ပခုံးပေါ်တွင် ကျရောက် လာနေသော သမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးတခု ဖြစ်လာပါသည်။
ဤတာဝန်ကို ရခိုင်အမျိုးသားများ ထမ်းဆောင်နေခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်၊ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ အကျိုး စီးပွားသာမက မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အကျိုးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ အရှေ့ တောင်အာရှ နိုင်ငံများ၏အကျိုးနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေပေသည်။ နိုင်ငံတကာမှလည်း သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ရခိုင်အကြောင်းကိုသိရှိရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ “ရခိုင်ပြည်နယ်”ဟူ၍ ယနေ့ဘောင်ခတ်ကန့် သတ်ထားသော နယ်မြေကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်ကလေးအကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးရုံနှင့် မလုံလောက်ပါ။
ရှေးခေတ်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံး ယခုသုံးပိုင်းကွဲ၍ သုံးနိုင်ငံစလုံး၌ ရခိုင်နှင့်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများ အားလုံး ယနေ့ထိနေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ထိုရခိုင်မျိုးနွယ်စုများအားလုံး၏ အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြမှသာ ရခိုင်အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။
ဥပမာ- ၁၆၆၆ ခုနှစ်အထိ ရခိုင်နိုင်ငံတော်၏ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်းဒေသ၌ ၁၇၈၂ ခုနှစ်ထိ ဘင်္ဂလီကုလားဦးရေ ၃% သာရှိသေးကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်တို့ကောက်ယူခဲ့သောသန်းခေါင်စာရင်းကို စာရှုသူများတွေ့မြင်သိရှိရလျှင် ယနေ့ဘင်္ဂလီခေါ်တောကုလားများက မိမိတို့ကိုယ်မိမိတို့ နှစ်တထောင်ခန့်ကပင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ နေထိုင်လာကြသောရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဖြစ်သည်ဟု လိမ်လည်နေခြင်းကိုလည်းကောင်၊ ယင်းဘင်္ဂလီခေါ်တောကုလားများ လူဦးရေအသားစီးရမှုလက်နက်ဖြင့် မကြာခင်မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကိုဝါးမျိုးလာတော့မည့် အန္တရာယ်ကိုလည်းကောင်း၊ စာရှုသူများမြင်သာထင်သာရှိလာကြလိမ့်မည်ဟု မျှောင်လင့်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤ “ ဘင်္ဂလားအော်လှိုင်းသံ” စာစောင်တွင် ဘင်္ဂလားအော်အရှေ့ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်ကမ်းကို ရိုက်ပုတ်နေသော လှိုင်းသံများကို ဖေါ်ပြပေးထားရုံသာမက တခြားဖတ်စရာမှတ်စရာများကိုပါ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:16
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အပိုင်း(၁) လှိုင်းသံများမှ စာလုံးများသို့ . All Rights Reserved